Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Dowladda Puntland oo Furay Shir looga hadlay Waxqabadka Mashruuca Abaabulka Dakhliga(Sawirro) – Puntaland Ministry of Finance
April 17, 2022 / Burale / 0 Comments
Kulanka waxaa ka soo qayb galay Agaasimaha Guud ee W/Maaliyadda Mudane Maxamed Cabdi Cilmi, Kuxigeenka Agasimaha Guud ee Dakhliga Mudane Abshir Maxamed Abshir iyo Madaxa Mashruuca DRM/PFM Mudane Sher Shah Khan iyo
Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Dakhliga Mudane Abshir Maxamed Abshir ayaa faahfaahin ka bixiyay Ujeedka kulanka oo ahaa sidii looga wada hadli lahaa qorshe horay loo dajiyay oo ku saabsan mashruuca xoojinta dakhliga oo Bangiga adduunku ka caawiyo Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Wasiirka ayaa xusay in Mashruuca Abaabulka Dakhliga (DRM/PFM) uu suurta geliyay in Dowladdu ay bixiso Mushaharaadka Shaqaalaha Rayidka ah, dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida Waddooyinka iyo dhismaha mashaariic cusub. Waxa kale oo ay saamayn weyn ku leedahay dhinaca bulshada sida Caafimaadka iyo Waxbarashada oo ay dowladu gacan weyn ka geysato horumarinta qaybaha.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda ayaa xusay in uu soo dhaweenayo shirka, isla markaasna uu diyaar u yahay in uu door muhiim ah ka qaato horumarinta iyo dardar galinta shaqooyinka, isagoo xoojiyay in Wasaaradda Maaliyadda ay ka faa’idaysan doonto taageerada bangigu uu siiyo.
Kulanka ayaa lagu soo bandhigay arrimaha qabsoomay, kuwa aan wali qabsoomin iyo sababta keentay in dib u dhac ugu yimaado shaqadaas, maadama mashruucu uu ku jiro xili gabagebo ah.
Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland ayaa hormuud u ah dhammaan mashaariicda Bangiga Adduunka uu ka caawiyo Dowladda Puntland iyadoo laga gaaray guulo waawayn horumarinta iyo dardar galinta mashaariicdaas.